လူဆိုးမကြီး (ငယ်ငယ်တုန်းက ရေးတဲ့စာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » လူဆိုးမကြီး (ငယ်ငယ်တုန်းက ရေးတဲ့စာ)
လူဆိုးမကြီး (ငယ်ငယ်တုန်းက ရေးတဲ့စာ)
Posted by sorrow on Sep 13, 2013 in My Dear Diary | 14 comments
ကျွန်ုပ်သည်…သင်နှင့်စတင်တွေ့ဆုံခဲ့သော 2005 ဒီဇင်ဘာလ 15 ရက်နေ့မှ စပြီး…သေလောက်အောင်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးမိသောကြောင့်…သင်၏ချစ်ခြင်းကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်..ခွေးရူးလိုက်သကဲ့သို့…
**နံနက်ငါးနာရီထပြီး ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာ အင်းစိန်မှ…ကျောက်မြောင်းသို့လာရောက်ပြီး မပျက်မကွက်သင့်ကို ကျူရှင်လိုက်ပို့ခြင်း….
**သင့်ကျူရှင်ရှေ့တွင် တရက်ကို လေးငါးနာရီမျှ ခြေတိုအောင် ရပ်စောင့်ခြင်း…
**ကျွန်ုပ်တို့အဲလိုင်း ချာတာလေယာဉ် ဆင်းသည်ကိုပင်..မသွားနိုင်ပဲ..နေမကောင်းသော သင့်အနားတွင် အလုပ်ပြုတ်ခံထိမတတ်နေခြင်း….
ကျွန်ုပ် အသည်းအသန်လိုက်လံကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကို..သင်နှင့်တကွ..သင်၏ဆတ်ဆလူးသူငယ်ချင်းများ အသိဖြစ်ပါသည် ။
သင်၏ချစ်ခြင်းကို ရရှိသည့်နေ့ရက် 2007 အေပရယ်လ2ရက်နေ့မှစပြီး…သင်၏ အူကြောင်ကြောင် ကိုးယို့ကားယားနိုင်သော တောင်းဆိုချက်များကို ဖြစ်နိုင်သည်မဖြစ်နိုင်သည်ကို အလေးမထား…
အသေခံတိုက်မည် ဟု ကတိပေးထားသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်ဘက်မှ တာဝန်ကျေခဲ့သည်ကိုလည်း…သင်နှင့် သင့် မျောက်မူးသေ..သူငယ်ချင်းများအသိဖြစ်ပါသည်။
**နေမကောင်းဘူး ..ဆေးလာတိုက်ဟူသော သင့်အီစီကလီ ရိုက်မှုတွင်..ရန်ကုန်မှ.မန္တလေးအထိ ကျွန်ုပ်..မအားလပ်သည့်ကြားမှဆေးလာတိုက်ခဲ့ခြင်း…
**တိုင်းတပါးသို့ ပညာသင်သွားရန်အခွင့်အရေးရခဲ့သော်လည်း…သင်၏ငိုယို ပလီမှုကြောင့် လက်လွတ်လိုက်ခြင်း…
အစရှိသဖြင့် …နေမြင့်ခဲ့သည်ကို သင်အသိဖြစ်သည်….
သို့သော်..သင်၏ဘက်မှ ကျေနပ်လောက်သော တုံ့ပြန်မှုကိုမရခဲ့သည့်အပြင်.သင်၏လက်သင့်မခံနိုင်သောပြစ်မှုများဖြစ်သော….
** လူလည်ကောင်တွင် သူငယ်ချင်းကောင်မလေးနှင့်သမုတ်ကာ ..အခွက်ကို လက်သီးစာကျွေးခြင်း..
**ကော်ဖီဆိုင်တွင်.မဆီမဆိုင်ဒေါသထွက်ကာ ..မျက်နှာကို သောက်လက်စရေခွက်နှင့်ပက်ခြင်း
**ဘာမဆိုရင်ဆိုင်မည်ဟု ပလီခဲ့ပြီး….သင်၏မိခင်ရှေ့နှင့် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆေးကျောင်းသားကောင်ရှေ့တွင် သူငယ်ချင်းပါဟု နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လိမ်လည်ခြင်း
အစရှိသောကျောက်ခောတ်အပြုအမူများကို နေမြင့်နေသောကျွန်ုပ်ဘက်မှ မျက်စိမှိတ်ဇွတ်ကြိတ်မှိတ်….သည်းခံပေးခဲ့သည်ကိုသင်မှတ်မိတန်ကောင်းပါသည်….
( နေ့ရက် အသေးစိတ်သိလိုလျှင် reference ရှိပါသည် )
ထိုမျှ ကျွန်ုပ်ဘက်မှ သဘောထားကြီးခဲ့သည်ကိုမထောက်ထားပဲ..တခြားရည်းစားထပ်ထားသည်ကို သက်သေနှင့်တကွသိရှိခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ်ဘက်မှ သင့်ကို 2008 ခုနှစ် ဗယ်လင်တိုင်းနေ့တွင် အရှုံးပေးစွန့်လွတ်ခဲ့သည်ကို လည်း..
သင်ထူးထူးထွေထွေ အံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့သည် မရှိခဲ့ပါ….တစ်ရန်ရှင်းသည်ဟု ပင်ပြောခဲ့သေးသည်ကို ပြန်ကြားခဲ့ရသည်…ထိုနေ့ရက်မှစပြီး…ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် သင့်ကိုနာကျင်ကြေကွဲစွာ…စွန့်လွတ်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ ကြေကွဲစွာပြီးဆုံးခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိဆိုလျှင် သုံးနှစ်ပင်တင်းတင်းပြည့်လုရှိပါလျှက် နှင့် သင့်ထံမှ ..တစ်ကနေပြန်စပါရစေ ဟူသော အဓိပါယ်မဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံရရှိသဖြင့်..အံ့သြတုန်လှုပ်မိပါသည်…ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နာကျင်ခံစားခဲ့ရသောအတိတ်ကို ပြန်လည်တူးဆွရန်ဆန္ဒတစုံတရာမျှ မရှိတော့ပါ..အတိတ်သည် အတိတ်သာလျှင်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူစေလိုသည် ။
ထို့အပြင်..ယနေ့အချိန်တွင်..ကျွန်ုပ်အနေနှင့် အင်မတန်ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသော အနေအထားကိုပိုင်ဆိုင်နေသည့်အပြင်..သင့်ထက်ပိုမို တန်ဖိုးထားမိသော တသက်စာချစ်သူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်..သူမသည် သင့်ထက်ပိုမိုရဲရင့်ပြတ်သားသော ရင်ဆိုင်ရဲသည့်…နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ကိုလည်း သိစေလိုသည် ။.
( စကားချပ်…ကျွန်ုပ်သူ့ကို ချစ်သည် ) ထို့ကြောင့်နောက်နောင်..ကျွန်ုပ်အားမနှောက်ယှက်ပါရန်မေတ္တာရပ်ခံ သတိပေးအပ်ပါသည် ။ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက..သင်ဖိန့်ဖိန့်တုန်ကြောက်လန့်သော သင်၏မိခင်ထံတွင် သက်သေနှင့်တကွတင်ပြအရေးယူ တိုင်တန်းမည်ကို သိစေလိုပါသည်။
good တယ် ဗျို့ 
ဟုတ်ရယ်..အချစ်ကြီးတယ်…ဟိုရှမ်းအပွေလိုဟုတ်ဘူး….အာဟိ…ခံရကာမှ ခံရ …
ဒီလောက်တောင် စစ်ကူ တွေနဲ့ ဟန်ပြခြောက် နေရတာ ကိုယ့် တပ်ကို မနိုင် လို့လား။
တင်းထားရင်း ကျ မသွားစေနဲ့ ဟေ့။
အရီးရယ်..နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေတယ်ဂျာ…ခံဖက်ကကြီးပဲ ..အဟီး
ရွာထဲက ဆယ်လစ်ဗရစ်တီတွေ လာမန့်ရင် ..သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ မေမေရယ်…အာဟိ
အဲ့ဒိ လက်ကိုတော့ အတော်ကြွေနေပီဗျ
ရေးလက် အတော်သွက်ပြီး သရော်ကွက် ထောင့်စေ့တယ် လို့ ခံစားရတယ်။
ကိုဂီ..အဲ့မျိုးက ခံရဖူးမှ သိတာဗျ…အဲ့မျိုးမရေးချင်တော့ဘူး ..အသီးနာတယ်…အဟီး